CAAWIMAD SHAQO LA'AANTA XANUUNKA
Magdhowga Xaalada Degdega ah ee Shaqo la'aanta (PEUC) waa barnaamij hoos yimaada Caawimada Karoonafayras, Tabarucaadka, iyo Ilaalinta Dhaqaalaha (CARES) Xeerka 2020 kasoo siinaya dakhli ku meel gaadha shakhsiyaadka bilaa shaqo noqday natiijo ka dhalatay xanuunka COVID-19 awgeed oo ama iskood u shaqeysta, ama aan lahayn taariikh shaqo uu ku filan si ay ugu haboonaadaan kabka, ama dhameeyey noocyadoodii kalee kabka caymiska shaqo la'aanta. waxa maalgalisay dawlada fadaraalka ah, maaha cashuurta shaqo la'aanta gobolka ee ay bixiyaan shaaleysiiyayaashu.
CAAWIMADA SHAQO LA'AANTA XANUUNKA (PUA):
Lacagta ugu yar ee shakhsiyaadka loo talo galay waxay noqonaysaa
Lacagta ugu badan waxay noqonaysaa
$481 todobaadkiiba oo aanay ku jirin ku tiraasanyaal
$591 leh afar ku tiirsane
Waxay bixinaysaa ilaa iyo 39 todobaad oo wadar kab ah
Todobaadka kobaad ee labixinayo: Wakhti hore ilaa Febraayo 2, 2020 ama todobaadka kobaad ee shakhsigu bilaa shaqo noqdo iyadoo ay keentay COVID-19, kiikastee danbeeya.
Todobaadka u danbeeya ee lacagta: Todobaadka ku Dhamaanaya Diisambar 26, 2020
Waa in ay lahaadaan kab lacageed oo gobolka ah lehna kab dhamaday, ama leeyihiin taariikh shaqo 18 kii bilood ee u danbeeyey. Tani waxa ka mida kuwa la qorsheeyey in ay shaqada bilaabaan lakiin aan awoodin COVID-19 awgeed iyo cawdayaasha aan hada ku habooneyn iyadoo ugu wacan tahay arimo kala saaris kabkooda ah.
DIGNIINTA WAX ISDABA MARINTA !
Hadii aad ku talo gal u sameysid ama u ugu kaliftid qof kale inuu sameeyo bayaan been ah ama si ku talo gal ah ugu guul daraysto ama ku kalifo inuu qof kale ku guul daraysto inuu sheego xaqiiqada agabkaiyo, natiijadaasi, helo Magdhowga Shaqo La'aanta ee Fadaraalka oo aanad xaq u lahayn, waxa ku qaban doonaa xukunka hoos yimaada 19 qeybta 1001 ciwaanka 18, Xeerka Mareykanka.
Ka tagista shaqada bilaa sabab si aad uga heshid lacag UI waxay noqonaysaa wax isdaba marin hoos timaada PUA.
Hadii, sababo aan la xidhiidhin COVID-19, aad ka tagtid shaqadaada bilaa sabab saxa, lagaaga joojiyo anshax xumo awgeed ama diidid inaad soo shaqo tagtid marka shaqadu diyaar noqoto, waa lagaa saari doonaa kabka lacagaha aad ka heshid bogolka ama barnaamijyada hada diyaarka ah. Tani macheedu waa in si aad u heshid kabka lacagaha sgaqo la'aanta gobolka ama fadaraalka, waa inaanad sameyn ficil kugu sababaya inaad bilaa shaqo u noqotid sabab aan la xidhiidhin COVID-19.
Waajibaadka caawinta ilmaha waa in loo jaraa lacagaha FPUC si la mida in yihiin heli caymiska shaqo la'aanta oo joogto ah..
Hadii aanad u shaqeyneyn COVID-19 awgii, waa inaad soo gudbisaa cabashadaada codsiga caymiska shaqo la'aanta online si aad u heshid foomkasta oo caymiska shaqada ah
Cabashadaada dibaa loo eegi doonaa si loo go'aamiyo inaad soo sheegtay musharka lowa si aad ugu gudubtid kabka caymiska shaqo la'aanta. Waxaad ku heli doontaa warqad iimaylka warqada cagaaran si laguusoo ogeysiiyo hadii aad ku haboon tahay kabka shaqo la'aanta joogtada ah. Waxaad heli kartaa warqadan ka dib markaad gudbisid cadeynta dakhligaaga. Dirista warqadani waxa loo soo diraa talaabo nidaamka ah ahaan si loo hubiyo in lagu siiyey kabka lacagta ee barnaamijka caymiska shaqo la'aanta saxda ah. Hadii aad marhoreba gudbisay cadeynta dakhliga, uma baahnid inaad talaabo kale qaadid. Waa lagula soo xidhiidhi doonaa hadii macluumaad dheeriya diyaar noqdo.
Hadii aad iska u shaqeysto oo lagaa saaray kabka joogtada ah ee UI, waxaa lagaaga baahan doonaa inaad ugusoo gudbisid cadeyn dakhliga onlaayn Waaxda Shaqaalaha lowa (IWD) si loo go'aamiyo ku haboonaanshahaaga PUA. Foomamka la aqbali karo hoos ayaa lagu taxay bogan qeybta lagu magacaabo "Maxaan u Baahnahay Inaan Bixiyo." Link-ga lagusoo gudbinaayo dakhliga onlaaynka ah: www.iowaworkforcedevelopment.gov/pua-application.
Lacagtaada todobaadlaha ah iyo kabka ugu badan ee PUA waxay ku saleysanaan doonaan dakhliga warqadaha aad siisid IWD.
Marka ay sheegashaadu dhamaato, waxa lagaaga baahan doonaa inaad dib usoo qoratid, xataa hadii ay jiraan hadhaa kuugu hadhsan PUA.
Aanu ku haboonaan noocyada kale ee caymiska shaqo la'aanta, oo ay ka mid yihiin caymiska (UI), Magdhowga Shaqo La'aanta Shaqaalaha Fadaraalka (UCFE), Magdhowga Shaqo la'aanta ee shaqalihii hore (UCX), Magdhowga Xaaldaha degdega ah ee Shaqo la'aanta (PEUC), Kabka Fidsan (EB), iyo Madhowga mudada dhow/Shaqada Mutadawacnimada ah (STC/VSW), AMA
Dhameystay noocyada kale ee caymiska shaqo la'aanta lagu xusay sare (haday suurto gal tahay), AMA
Iskii u shaqeysanaayey oo aanu ku habooneyn mid ka mida noocyada kale ee caymiska shaqo l'aanta lagu xusay sare, AMA
Uu qorshaynaayey inuu bilaabo inuu u shaqeeyo shaqaale oo aanu ku habooneyn mida ka mida noocyada kale ee caymiska shaqo l'aanta lagu xusay sare, AMA
Uuna ku habooneyn sheegashada caymiska shaqo la'aanta ee gobol kale ama dhul Mareykanka ah, IYO
Si buuxda ama badh ahaan uga shaqeyn la'aa sababaha COVID-19 ee hoos lagu xusay.
SABABAHA U GUDBISTA COVID-19:
Si uu ugu haboonaado PUA, shakhsigu waa inaanu shaqeynayn, badh ahaan u shaqeynayn, ama aanu awoodin inuu shaqeeyo COVID-19 awgii sababaha la xidhiidha ee hoos lagu xusay.
Shakhsiga laga helay COVID-19 ama uu waajahaayo astaamaha COVID-19 oo uu raadinaayo daryeel caafimaad;
Qof ka tirsan qoyska shakhsiga laga helay COVID-19;
Shakhsigu siinaayo daryeel qof ka mida qoyska shakhsiga oo laga helay COVID-19;
Ilme ama qof kale oo qoyska qofka ka tirsan kaasoo shakhsiga ka saaran masuuliyad daryeel siin ah aanu awoodin inuu ka qeyb galo dugsi ama xarun kale oo loo xidhay natiijada xaalada degdega ah ee caafimaad COVID-19 oo dugsigani ama xaruntani looga baahan yahay shaksigu inuu ka shaqeeyo;
Shakhsigu aanu awoodin inuu gaadho goobta shaqada sababtoo ah karantimayn ay soo rogtay natiijada xaalada degdega caafimaadka dadweynaha ee COVID-19;
Shakhsigu aanu awoodin inuu gaadho goobta shaqada sababtoo ah shakhsiga daryeel bixiye caafimaad ayaa ku waaniyey inuu iskarantimeeyo walaacyada la xidhiidha COVID-19 awgii;
Shakhsiga loo qorsheeyey inuu dhameysto shaqo oo aanu haysan shaqo ama aanu awoodin inuu gaadho shaqada natiijada xaalada degdega ah ee caafimaadka dadweynaha COVID-19 awgii;
Shakhsigu uu taageero ama caawiyo qoyska sababtoo ah masuulkii qoyska ayaa u dhintay natiijada COVID-19 awgii;
Shakhsigu uu ka tago shaqadiisii sababtoo ah natiijada COVID-19 awgii;
Goobta shaqada ee shakhsiga ayaa loo xidhay natiijada xaalada Caafimaad dadweynaha ee COVID-19 awgii;
KUWA AAN KU HABOONEYN CAAWIMADA SHAQO LA'AANTA WAXA KA MIDA SHAKHSI:
Awooda inuu kasoo shaqeeyo guriga oo mushahar leh oo wali sii shaqeyn kara saacado la mida kuwii uu shaqeyn jiray helayana mushahar la mida.
Kasoo helaaya mushahar fasax xanuun ama fasax kale oo lacagtaasi ka badan tahay lacagtooda todobaadlaha ah ee PUA.
Kasoo ku haboon barnaamijka shaqo la'aanta ee gobol kale ama fadaraalka (oo ay ka mid yihiin caymiska shaqo la'aanta (UI), Magdhowga Shaqo La'aanta Shaqaalaha Fadaraalka (UCFE), Magdhowga Shaqo la'aanta ee shaqalihii hore (UCX), Magdhowga Xaaldaha degdega ah ee Shaqo la'aanta (PEUC), Kabka Fidsan (EB), iyo Madhowga mudada dhow/Shaqada Mutadawacnimada ah (STC/VSW)], Caawimada Mushkilada Shaqo La'aanta (DUA), iyo Kabka Tababarka Fidsan (TEB),
SIDA LOO CODSADO CAAWIMADA SHAQO LA'AANTA (PUA)
Fiiro gaara: Si degdega ah, waxaad ugu gudbin kartaa cadeynta dakhligaaga Caawimada Shaqo La'aanta (PUA) wabsaaydkan. PUA waa kab fadaraala oo diyaar u ah shaqaalaha aan awoodin ay shaqeeyaan xanuunka COVID-19 awgii oo aana ku habooneyn caymiska shaqo la'aanta gobolka. Noocyada shaqaaleysiinta ee ay kafaalo qaadayso PUA hoos ayaa lagu taxay:
Shaqaalaha iskood u shaqeysta
Shaqaalaha galinka kaliya ee aan haysan taariikh shaqo ku filan si ay ugu haboonaadaan sheegashada kabka lowa.
Waxa laagaga baahan yahay inaad gudbisid cadeynta dakhligaaga si aad ugu haboonaa tahay PUA. Waxaad kusoo gudbin kartaa cadeynta dakhligaaga wabsaaydkan. Fadlan raac tilmaamaha hoose:
TALAABADA 1: CODSO LACAGTA SHAQO LA'AANTA
Hadii aanad mar horey sidaasi sameyn, ka codso caymiska shaqo la'aanta halkan: https://www.iowaworkforcedevelopment.gov/file-claim-unemployment-insurance-benefits.
Guji “Apply Online Now”.
Waaxda Shaqaalaha lowa (IWD) ayaa go'aamin doonta hadii aad ku haboon tahay kabka shaqo la'aanta gobolka.
TALAABADA 2: GUDBI CADEYNTA DAKHLIGA
Ka dib markaad sameysid codsiga caymiska shaqo la'aanta, ku gudbi cadeyntaada dakhliga hoose adoo Gujinaya "Submit Proof Here"
Dhameystir su'aalaha foomka onlaaynka ah.
Kusoo dir warqada(daha) cadeynta dakhligaaga. Taariikhda musharkaagu waxay u baahan tahay in la sameeyo. Tani waxa lagu sameyn karaa iyadoo lagusoo lifaaqaayo mid ka mida warqadahan soo socda:
2019 1099 Dakhliga Nusasaacaha Kaliya
Foomka 1040 - U.S. Soo celinta Cashuurta ee Shakhsiga
Khiyaarada dheer ee lagu sharxay hoosta boga gudbinta
Ka dib gudbinta dukumentiyada, waxaad heli doontaa ogeysiis fariin in gudbintaadii la helay
TALAABADA 3: TALAABOOYINKA XIGA
IWD waxat qiimeyn doontaa cadeynta dakhligaaga kuuna soo saari doontaa warqada go'aanka. Hadii macluumaad dheeriya loo baahdo, waa lagula soo xidhiidhi doonaa.
Waxaad iimaylka ku heli doontaa warqad cagaaran. FADLAN ISKA ILOW OGEYSIISKAN. MA KHUSEEYO DADKA ISKOOD U SHAQEYSTA (PUA) CODSIGOODA. Ogeysiiskani waxa soo diray sistamka mana khuseeyo dadka iskood u shaqaysta. Hadii aad mar horeyba gudbisay cadeynta dakhligaaga, uma baahnid inaad qaadi talaabo kale KA DIB MARKAAD HESHID OGEYSIISKA. Hadii aanad bixin warqado ku filan, waa lagula soo xidhiidhi doonaa hadii macluumaad dheeriya diyaar noqdo. Wax talaabo oo kale lagaagama baahna markaad heshid ogeysiiska ka dib ilaa aan toos kuula soo xidhiidhno.
Waa inaad sii wadaa inaad sameysid codsigaaga todobaadlaha ah. Marka cadeyntaada dakhliga la eego lana ansixiyo, lacagta dhamaan todobaadyadii aad sheego oo dhan waa lagu siin doonaa.
KU GUDBI CADEYNTA HALKAN
TALAABOOYINKA XIGA EE ISKOOD U SHAQEYSTAYAASHA, QANDARAASLAYAASHA MADAXA BANAAN, SHAQAALAHA GIG, KUWA HAAYDAHA, DADKA INTARNADKA KA SHAQEYSTA, IWM:
Warqada Cagaaran: Hadii aad gudbisay codsi shaqo la'aan oo aad iskaa u shaqeysatid, qandaraasle tahay, shaqaale gig, iwm., fadlan iska daa foomkan aad ka heshay IWD warqada cagaaran. Waa foom guud oo koomiyuutarku sameeyey culaysna kuma laha codsigaaga. Wax talaabo oo kale lagaagama baahna wakhtigani.
Hadii aanad bixin Macluumaad Ku filan
Waxay IWD kaalasoo xidhiidhi doonaa tilifoonka.
Marka Codsiga Dib loo Eego:
Waxaad heli doontaa warqad hadii codsigaaga la ansixiyo ama la diido waxaanad heli doontaa iimayl hadii codsiga la ansixiyo.
Hadii codsigaaga la ansixiyo, waxaad ku heli doontaa lacagta 5-7 cisho.
Hadii codsigaaga la diido, waxaad heli doontaa 60 cisho rafcaan ah.